कतारले चार चरणमा प्रतिबन्ध हटाउने, अगष्ट १ देखि कतार जान पाइने – Sidha Onlinepatra
साउदी अरबले कामदारको तलब वृद्धि गर्ने, कहिले र कति ?
चुनाव हारेपछि कमल थापाको रुवावासी !
प्रधानन्यायाधीश हटाउँदैमा न्यायालय सुधार हुँदैन : ओली
कतारमा म्याद सकिएको ‘आकामा’ रिन्यु गर्न लाग्ने जरिवानामा ५० प्रतिशत छुट
पूर्व प्रेमी सम्झँदै प्रिन्सीले रुँदै भनिन् : संसारमा मैले हेट गर्ने उहाँलाई नै हो
कोभिड उपचारमा प्लाज्मा थेरापी प्रयोग नगर्न डब्ल्यूएचओको सुझाव
घट्यो सुनचाँदीको भाउ : तोलाको कतिमा हुँदैछ कारोबार ? हेर्नुहोस्
मुख्य पृष्ठ /News/कतारले चार चरणमा प्रतिबन्ध हटाउने, अगष्ट १ देखि कतार जान पाइने
कतारले चार चरणमा प्रतिबन्ध हटाउने, अगष्ट १ देखि कतार जान पाइने
२७ जेठ, दोहा ।
कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न कतारले विभिन्न क्षेत्रमा लगाउदै आएको प्रतिबन्ध चार चरणमा तीन महिना भित्र क्रमिक रुपमा हटाउने भएको छ ।
बिशेष सावधानी अपनाउदै सेप्टेम्बरसम्म मुलुकलाई सामान्य तर्फ लैजाने विपति ब्यबस्थापन समितिकी प्रवक्ता लोल्वाह बिन्त रशिद अल खतेरले पत्रकार सम्मेलन मार्फद जानकारी दिएकी छिन् ।
पहिलो चरणमा जुन १५ देखि केहि मस्जिदहरु, केहि सपिङ्ग सेन्टरहरु केहि पार्कहरु, केही निजी स्वास्थ्य सस्थाहरु लगायत खोलिने छ । २० प्रतिशत कामदारहरूले सबै सावधानीका आवश्यकताहरूका साथ काम शुरू गर्ने छन् ।
कतार बाहिरको यात्रामा अत्यन्त जरुरी भएमा र जो कोही दोहा फर्किएमा उनीहरूले व्यक्तिगत खर्चमा १४ दिनसम्म होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्ने छ ।
दोश्रो चरण जुलाई १ देखि सीमित घण्टाको लागि महलहरू खोलिने छ भने सीमित क्षमता र विशिष्ट घण्टाको लागि बजारहरू खुल्दै जाने छन् । कम क्षमताको साथ सिमित रेस्टुरेन्टहरू खोलिने छन् भने सीमित क्षमता र विशिष्ट घण्टाको लागि संग्रहालय र पुस्तकालयहरू खोलिने छ ।
तेश्रो चरण अगष्ट १ देखि बिमानस्थल, किनमेल गर्ने सम्पूणर् मार्केटहरु, स्वास्थ्य क्लब, फिटनेस हल, पौंडी पोखरी, सैलुन र मसाज केन्द्रहरू खोलिने छ भने कोराना भाइरस कम भएका देशहरुबाट छुट्टी रहेका कामदारहरु कतार फर्किन पाउने छन् भने आएपछि १४ दिनसम्म अनिवार्य रुपमा क्वारेन्टाइनमा बस्नु पार्ने छ ।
यी प्रतिबन्ध हटेपनि अनिवार्य रुपमा माक्स लगाउनु पर्ने छ भने सामाजिक दुरी पनि कायम गर्नु पर्ने छ । चौथो चरणमा स्थिति सामान्य बन्दै गएपछि सेप्टेम्बर १ देखि सबै प्रतिबन्ध हटाइने प्रवक्ता अल खतेरले बताइन् ।
आज मंगलबार पनि ह्वात्तै बढ्याे सुनकाे भाउ, यस्ताे छ आजकाे भाउ
अभिनेत्री साम्राज्ञी घटनाले लियो ठूलो रुप: कलाकारले नै यस्तो अभियान चलाएपछि भुवन केसी अप्ठेरोमा
सरकारले वृद्ध भत्ता बढायो, अब मासिक कति ?
बिहेकै दिन बेहुला बेहुली बाटैमा अलग हुनुपर्दा……..